Mmefu ego Aghuru Black oghere TCDD 2 Ijeri 558 Nde Pound | RayHaber
HomeTurkeyCentral Anatolia Region06 AnkaraTCDD 2 ijeri 558 Nde Mfu
18 / 11 / 2019 06 Ankara, Central Anatolia Region, ụgbọ okporo ígwè, General, oru, Isi akụkọ, Turkey, TCDD
butcesi black Unde donusen tcdd ijeri kwuru nde mebiri
TCDD 2 Ijeri 558 Nde LL The Republic of Turkey State Railways (TCDD) toro losses. Nde dollar 90 nke 2 nke ilgbọ okporo ígwè State, nke agbanweela n'ime oghere ojii ruo ọtụtụ afọ, ataala ahụhụ.
SözcüIsmail Sahin dịka ozi si dị; Kamu dị ka nkwupụta nke ụlọ ọrụ ọha na eze nke oflọ Ọrụ Na-echekwa Ego na Ego maka 2018 afọ, 2017 kwupụtara mfu nke ijeri 2 ijeri na Razọ Stategbọ okporo Ọchịchị. 2018'de mwepu ndekọ mkpokọ nhazigharị nke TCDD'in 27 ijeri fam na afọ ndị gara aga.
Gaa n'ihu ntụgharị ikuku
Thelọ ọrụ a, bụ nke na-enwebeghị ike ịmepụta ihe dị n'ime n'ihi oke ya ruo ọtụtụ afọ, na-egbo mkpa akụ na ụba ya na ntinye site na mmefu ego nke ndị ozi. TCDD, nke bụ ọgbakọ kacha agbanwe ego n'ime sistemụ SOE, jigidere atụmatụ a na 2018. Ego ruru 2018 ijeri na 7.4 site na mmefu ego nke Agency si n'aka nke Mịnịstrị nke oflọ Akụ na Financelọ Ego nke ijeri 3.9 pound site na ntinye nke isi obodo.
Na 2016, ọnụ ọgụgụ ndị ọrụ na TCDD, ebe puku mmadụ 25 rụrụ ọrụ, belatara na 2017 puku 14 na 468. N'afọ gara aga, ọnụ ọgụgụ ahụ bụ 1.4 puku 14, na-agbadata karịa karịa 263 percent. Nchịkọta ọrụ ego ọrụ nke 2018'de mụbara 13.1 pasent 1 ijeri 356 nde pound. Dị ka nke 2018, TCDD nwere ngụkọta kilomita 9 puku 131 kilomita na otu puku kilomita nke 2 nke ụgbọ elu, gụnyere 396 puku 11 na 527 puku 213.
IETT kwupụtara 2,5 Afọ 2019 Boundary Year Budget
Ọ na-aga ka Turkey si Transportation Project emefu ego
Ọnụ ego ịkagbu nke Metro na-arụ ọrụ nde million nde nde mmadụ!
CHP Pụrụ Iche: "7.9 na Highway na Bridge Tenders"
Site na 2019 Year Budget ka TCDD 7 Million TL
Nkwa ndị njem na BOT na-enwetụ ọhaneze 65 Nde…
Minista Arslan: "N’afọ 14 ikpeazu obodo nwere ike ịnweta na…
Ụgbọ okporo ígwè obodo
nọmba ndị ọrụ tcdd